Palestina/Gaza: Fiomanana Ho Amin’ny Diaben’ny Fahalalahana ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2018 16:49 GMT
Vakio amin'ny teny русский, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Swahili, Español, English
Ny 31 Desambra , natao ny Diabem-pahafahana ao Gaza mba hanamarihana ny faha-herintaona ny Operation Cast Lead, fanafihan'ny Israeliana an'i Gaza.
Manetsiketsika fanohanana iraisam-pirenena mba hanao diabe miaraka amin'ny mponin'i Gaza, amin'ny hetsika firaisankina milamina sy miaraka amin'ny fanantenana hamarana ny fahirano ao Gaza ny Fikambanambe Iraisam-pirenena Hamaranana ny Fanaovana Fahirano Tsy Ara-dalàna an'i Gaza.
Maro tamin'ireo mpandray anjara no efa tonga tao Kairo tamin'ny fiomanana
Fandraisana anjaran'ireo olona maro malaza ny Diabe ho an'ny Fahalalahana, anisan'izany ilay mpanoratra Alice Walker, mpilalao sarimihetsika Syriana sady talen'ny Duraid Lahham, Roger Waters ao amin'ny Pink Floyd, ary ny vondrona mpiangaly rap MAP, ankoatra ny hafa. Anisan'ireo mpandray anjara i Hedy Epstien, 84 taona, ilay tafavoaka velona tamin'ny Fandripahana Jiosy.
Mavitrika amin'ny fanentanana momba ny diabe i Hedy Epstein. Tamin'ny 01 Desambra 2009, niaraka tamin'i J'Ann Allen, vadinà miaramila misotro ronono sy Sandra Mansour, Palestiniana mpitsoa-ponenana, namoaka fanasana ampahibemaso ho an'ilay mpikatroka politika, Mendrika tamin'ny Loka Nobel sady sisa velona tamin'ny Fandripahana Jiosy Elie Wiesel izy mba ho any Gaza miaraka aminy. Namporisihana i Wiesel mba “Hanapaka ny Fahanginanao sy Hiaraka Aminay”, nandritra ny kabary tao amin'ny Oniversiten'i St.Louis:
Nankasitrahana betsaka ny fandraisana anjaran'i Hedy Epsteins tamin'ny Diabe:
Desertpeace nidera ny fandraisany anjara:
Tena aingam-panahy ny mahita ny sisa velona tamin'ireo tolona mahatsiravina [ny Vono moka] miady amin'ny faharatsiana amin'izao fotoana izao. Miresaka momba an'i Hedy Epstein aho, izay, amin'izao fotoana anoratako izao, eny an-dalana ho any Gaza mba handray anjara amin'ny Diaben'ny Fahalalahana ao Gaza. Izany no tokony ‘vokarin'ny’ Vono moka amin'ny maha ‘orinasa’, orinasa izay tsy mamela ny famerenana ny lasa …. TSY HISY INTSONY!
Na dia izany aza, nisy ny olana tamin'ny fikarakarana ny diabe, ary niharan'ny fanakianana ihany koa ny mpikarakara “Fikambanambe Iraisam-pirenena Hamaranana ny Fahirano Tsy Ara-dalàna ao Gaza”.
Norman Finkelstein, mpanoratra ny Indostrian'ny Vono Moka sady ‘mpanonofy’ ny diabe, no mpikambana voalohany mavitrika tao amin'ny fikambanambe, saingy efa niala. Avy amin'ny fanovana niadian-kevitra be tamin'ny fanambaran'ny fikambanambe ny fahadisoam-panantenany. Ny fanambarana voalohany nataon'ny fikambanambe dia ny hanao diabe handrava ny fahirano araka ny fitsipika tsy fanaovana herisetra sy voasoratra ao amin'ny lalàna iraisam-pirenena. Novaina avy eo ny fanambarana ka nampidirina ny ‘sehatra politika’, izay heverin'i Finkelstein ho fisaratsarahana satria ahitana lohahevitra mampifanditra tsy ilaina tamin'ny fangatahana tany am-boalohany. Na dia tsy mamaritra mazava ny tena fanovàna natao izay nolaviny aza izy, dia naneho hevitra tamin'ny lahateniny izy hoe Nahoana aho no niala tao amin'ny Fikambanamben'ny Diaben'ny Fahafahana Gaza::
Tsara angamba ny manipika fa ny teboky ny fifandirana dia tsy ny hoe misy olona nanohana manokana ny zo na ny paikady Palestiniana manokana mba hampitsaharana ny fibodoana. Fa hoe ilaina ve ny fampidirana zo na paikady manokana ao amin'ny fanambaran'ny fikambanambe kanefa samy tsy misy ifandraisany amin'ny tanjona avy hatrany amin'ny fandravàna ny fahirano izany sy mampihena ny vinavina ho amin'ny fihetsiketsehana faobe tena izy.
Narahana fanesorana mpikambana mavitrika maro hafa ny fialàny malaza. Nanamarika i Max ao amin'ny Jewbonics fa malahelo izy noho ny fialany tamin'ny hetsika. Amin'ny maha mpikarakara ny diabe azy, namaly tamin-tahotra izy fa mety handao ny hetsika ny hafa, hoy izy:
Mino aho fa azo antoka ny milaza fa ho takon'ny isa azo ny isa very, raha ny famantarana hitako manokana sy hitako tamin'ny aterineto.
Na dia eo aza ny ahiahy manoloana ireo isa marobe manohana ny diabe, azo antoka fa fihetsiketseham-bahoaka ity, ary sambany ny Palestiniana no hitambatra marobe tahaka izany miaraka amin'ny fanohanana iraisam-pirenana: tombanana ho 1300 ireo mpandray anjara iraisam-pirenena, izay hihaona ao Kairo ary hanao diabe miaraka amin'ireo mponina ao an-toerana eo amin'ny 50000 eo raha vao tafiditra ao Gaza amin'ny alalan'i Rafah izy ireo.
Tao amin'ny Electronic Intifada, Rami Almeghari nitatitra fa:
Tao anatin'ny volana vitsy, mihevitra ny olona ao Gaza fa nanomboka nifantoka tany an-kafa ny sain'ny fiarahamonina iraisam-pirenena, tsy miraharaha ny fahirano ao Gaza. Vitsy ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena nitodika tamin'ny toe-javatra teto.
Manantena hanova izany ny diabe. Mustafa al-Kayali, mpandrindra ny komity ho an'ny Diabem-pahafahana an'i Gaza, nitatitra hoe:
Miantso ireo iraisam-pirenena izay tonga eto izahay mba tsy hijery ny fitsidihan'izy ireo ho toy ny fizahan-tany. Fa kosa, tokony hampita hafatra tena izy avy eny ifotony ho an'ny vahoakany, ny fikambanany na ny governemantany izy ireo.
Ny ankamaroan'ny tanora ao an-toerana izay noresahako momba ny Diabem-pahafahana an'i Gaza dia naneho fientanentanana sy hafanam-po amin'ny fandraisana anjara. Maniry ny handefa hafatra any amin'ny tontolo ivelany izy ireo fa ao ny vahoaka Palestiniana ary tokony hiray saina ny olombelona mba hahazoana fahalalahana.
Azo jerena ato ny vaovao maro momba ny Diaben'ny Fahafahana Gaza, ireo mpandray anjara, ny tanjony sy ny fiomanana amin'izany.